अंश दिन मालपोत गएकी वृद्धाले लाइन बस्दा बस्दै प्राण त्या’गिन ! – Dailny NpNews
अंश दिन मालपोत गएकी वृद्धाले लाइन बस्दा बस्दै प्राण त्या’गिन !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०७८ समय: २०:२४:४१
काठमाडौं: मकवानपुरमा मालपोत कार्यालयमा लाइन बस्दाबस्दै एक जना वृद्धाको मृ,त्यु भएको छ।चार दिनदेखि जग्गा नामसारी गर्न मालपोत कार्यालय धाउँदै आएकी मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ घर भएकी ७८ वर्षीया पञ्चमाया गौतमको बिहीबार दिउँसको मृ,त्यु भएको हो । आफन्तले दिएको जानकारी अनुसार वृद्धा चार दिनदेखि अंशबण्डाको जग्गा नामसारी गर्न मालपोत धाइरहेकी थिइन् ।
बिहीबार लाइन बस्ने क्रममा उनी एक्कासी कार्यालय परिसरभित्रै बे’होस भएकी हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले लाइनमा बस्दाबस्दै वृद्धा ढलेको जानकारी दिए। को’रो ना संक्र’मणका कारण जो’खिम भएकै बेला मालपोतमा भि’ड अत्यधिक हुनु र चर्को ग’र्मीका कारण बे’होस भएर वृद्धा ढलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
‘वृद्धा लाइनमा बस्दाबस्दै बे’होस भएर ढ’ल्नु भएछ । मृ,त्यु भइसकेपछि परिवारले हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेर लगेका छन्,’ दासले भने । दासका अनुसार ती वृद्धा द’मको रोगी थिइन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र भण्डारीले कार्यालयको लापर’बाहीको कारण वृद्धाको मृ,त्यु नभएको दाबी गरे । उनले वृद्धा बिरा’मी जस्तो देखिएपछि औषधि उपचार गराएर मात्रै ल्याउन कर्मचारीले आग्रह गरे पनि परिवारले नमानेको बताए ।